The Irrawaddy's Blog: ကွန်ပြူတာမှာ Viber ထည့်ပြီး ဖုန်း အခမဲ့ခေါ်နိုင်ပြီ
ကွန်ပြူတာမှာ Viber ထည့်ပြီး ဖုန်း အခမဲ့ခေါ်နိုင်ပြီ
Viber ဆိုတဲ့နာမည်ကို မြန်မာပြည်မှာ လူအများအပြား ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Viber ဟာ စာပို့ ခြင်း နဲ့ နိုင်ငံခြားသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို အင်တာနက်ကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုပြီး လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ software တခုပါ။ နိုင်ငံခြားနေပေမယ့် Viber အားကိုးနဲ့ ဖုန်း အခမဲ့ခေါ်နိုင်ပါပြီ နောက်ပိုင်း လူသုံးများတဲ့ WhatsApp, Line and WeChat တို့ လိုပဲ Viber ဟာ လူကြိုက်များတဲ့ messaging apps အမျိုးအစားတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အင်တာနက်ကွန်ရက်တွေကြားကနေ စာပို့ တဲ့စနစ်ဟာ ရေပန်းစားတာမို့Social Network တခုဖြစ်တဲ့ Facebook ဟာလည်း သူ့ရဲ့ စာပို့ စနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်ဖန်တီးနေသလို၊ တဖက်ကလည်း ပိုက်ဆံပေးပြီး စာပို့ ရတဲ့စနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါ့အပြင် Facebook က သူ အခြေစိုက်ရာ ဒေသမှာ တယ်လီဖုန်း ၀န်ဆောင်မှုတခု ထွင်ထားပါသေးတယ်။ ဒီအကြောင်း အမေရိကမှာ Facebook ကနေ ဖုန်းအခမဲ့ပြောနိုင်ပြီ ဆိုပြီး ဧရာဝတီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org/2013/01/facebook_19.html မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်)ဒါကြောင့်ပဲ Viber ဟာ အပြိုင်အဆိုင် တွေကြားကနေ ထိုးဖောက်ထွက်လာပြီး အခုအခါမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာသာ အသုံးပြုလို့ ရတဲ့စနစ်ကနေ ကွန်ပြူတာတွေမှာ သုံးလို့ ရအောင် ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပါပြီ။Viber 3.0 ဟာ အင်္ဂါနေ့ တုန်းက iOS နဲ့Andriod ဖုန်းတွေအတွက်နောက်ဆုံး version ထွက်လာသလို ကွန်ပြူတာ နဲ့ အသုံးပြုလို့ ရအောင်လည်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထွက်ရှိလာတာပါ။ ကွန်ပြူတာမှာလည်း Windows ကွန်ပြူတာတွေအတွက် ကော Mac ကွန်ပြူတာတွေအတွက်ပါ အသုံးပြုလို့ ရအောင် ထွက်ရှိလာပါတယ်။ Viber ဟာ မိုဘိုင်းလောက မှာကြီးစိုးအပြီး ကွန်ပြူတာတွေမှာလည်း ပရိသတ်ရရှိဖို့ ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်လာကြောင့် နာမည်ကျော် Skype နဲ့ အပြိုင်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။အင်တာနက်ကနေ ဖုန်းပြောဖို့ ရတဲ့စနစ်မှာ ကြီးစိုးလာတဲ့ Viber ကို ယခုအချိန်မှာ အသုံးပြုသူ သန်း ၂၀၀ ကျော် ရှိပြီး ပုံမှန် အသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀ လောက် ရှိနေတယ်လို့Viber အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် တယ်မွန်မာကို က ပြောဆိုသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ရှိတဲ့ Viber 3.0 မှာ စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တွေ ပါရှိလာပါပြီ။ ဗီဒီယိုဖိုင် ပို့ လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် "stickers" ပုံ အသစ်တွေကိုပါ ပေးပို့ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ iPhone ရှိမှ၊ Andriod ဖုန်းရှိမှ သုံးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကန့်အသတ်တွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတာပါ။ခုတော့ မိမိရဲ့အိမ် (သို့ ) အင်တာနက်ဆိုင်က ကွန်ပြူတာသုံးပြီး အဝေးရောက် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်ကနေ စကားပြောနိုင်ပါပြီ။အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://www.viber.com/#windows ကို သွားရောက်ပြီး သင့်ရဲ့စက်ထဲကို ကူးယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းဦးလင်း ~
ဧရာဝတီ Facebook / ဧရာဝတီ Twitter .
Saung Oo Linn
kyaw kyaw thet
So excellent for Myanmar. I like it so much.
ယခုတွေ့မြင်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှ တိရိစ္ဆာန်လောကက သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေရဲ့အဖြစ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဆူးများနဲ့ “ဖြူ” သတ္တ၀ါကောင်ကို သွားမထိကြဖို့ သင...
အင်ဒိုနီးရှားမှာပြုလုပ်တဲ့မစ္စတာအာရှသံတမန်ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မော်ဒယ်လ်နေဦးခ ရရှိ မစ္စတာအာရှသံတမန်ဆုရရှိသူ မော်ဒယ် နေဦးခ မြန်မာနိုင်ငံက မော်ဒယ်လ် နေဦးခ ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်ကနေ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ကျင်း...
နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ Toyota Alphard
photo-edmunds.com ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဇိမ်ခံ မော်ဒယ်လည်းဖြစ်၊ နောက်ပြီး အတွင်းခန်းကျယ်ကျယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းကောင်းနဲ့ေ...
နံနက်စောစောစာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းညှိပါ
မနက်စောစောစာကို မရှောင်တဲ့သူတွေဟာ ရှောင်တဲ့သူတွေထက် ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် ထိန်းညှိဖို့ အထောက်အကူပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ နံနက...
MPT ရဲ့ဆုပေါင်း (၇) သောင်းပါဝင်တဲ့ “ပျော်ရွှင်ကံထူးနှစ်သစ်ကူး” အစီအစဉ်ပြုလုပ်မည်
ဓာတ်ပုံများ - သီဟတိုး/ The Irrawaddy မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) မှ MPT ဆင်းမ်ကတ် သုံးစွဲသူပြည်သူများအတွက် ဆုမဲပေါင်း (၇) သောင်း...
ဖက်ရှင် နဲ့ အလှအပ